आज जेष्ठ २७ गते बिहिबार, कस्तो छ तपाईंको राशिफल ? - kageshworikhabar.com
आज जेष्ठ २७ गते बिहिबार, कस्तो छ तपाईंको राशिफल ?
आज मिति वि. सं. २०७८ साल जेष्ठ २७ गते बिहिबार, तपाईंको आजको राशिफल
दिन मध्यम फलदायी छ । खर्च गर्दा विशेष ध्यान राख्नुहोला। पैसा र लेनदेन सम्बन्धि सबै काममा सावधान हुन आवश्यक छ। कसैसँग विवादमा नपर्नुहोला। मित्र एवम परिवारसँग मनमुटाव हुन सक्ला। स्वास्थ्यको ध्यान राख्नुहोला।
दिन शुभ फलदायी छ। रचनात्मक र कलात्मक शक्तिहरू बढ्नेछ। मानसिक रूपले वैचारिक स्थिरता महसुस गर्नुहुनेछ। आर्थिक उत्तरदायित्व राम्रोसँग निभाउन सक्नुहुनेछ। आर्थिक योजना बनाउन सक्नुहुनेछ।
दिन कष्टदायी हुनाले हरेक कार्यमा सावधान रहनुहोला। परिवार एवम् सन्तानसँग झगडा हुन् सक्ला। उग्रता एवम् आवेगमा ध्यान नराख्दा काम बिग्रन सक्ला। शारीरिक स्वास्थ्य बिग्रन सक्ला। आँखामा पीडा हुन सक्ला।
तपाईंको दिन लाभदायक छ। कुनै अन्य तरिकाबाट आर्थिक लाभ होला। साथीसँग भेट होला। व्यापारमा लाभ होला। सन्तान र जीवनसाथीबाट सुख मिल्नेछ। विवाहको योग छ। सन्तानसँग भेट होला। शारिरिक र मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ रहला। कुनै प्राकृतिक स्थानमा जाने योजना बनाउन सक्नुहुनेछ।
व्यवसायिक दृष्टिले राम्रो एवम् श्रेष्ठ दिन छ। हरेक काम सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनेछ। उच्च पदाधिकारीको कृपादृष्टि रहनेछ। पिताको तर्फबाट लाभ मिल्न सक्छ। सरकारी कार्यमा लाभ मिल्नेछ। स्वास्थ्यको ध्यान राख्नुहोला । गृहस्थजीवन मधुरतापूर्ण रहला।
तपाईंको दिन राम्रो छ। आफन्तसँग भ्रमण आयोजन गर्नुहुनेछ। मित्रसँग भेट हुन सक्ला। धार्मिक कार्य र धार्मिक यात्रामा व्यस्त रहनुहुनेछ। विदेशमा रहेका प्रियजनको समाचारबाट खुशी रहनुहुनेछ। आर्थिक लाभको दिन छ।
नयाँ काम सुरु गर्नुहुनेछ। भाषा र व्यवहारमा ध्यान राख्नुहोला। घृणाबाट टाढा रहनु नै उत्तम साबित हुनेछ। रहस्यमय कुरा र गूढविद्या प्रति आकर्षित रहनुहुनेछ। आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त गर्नको लागि शुभ समय रहेको छ।
दिन फरक तरिकाले बित्नेछ। स्वयमको लागि समय निकाल्न सक्षम हुनुहुनेछ। साथीसँग घुमफिर एवम् मनोरंजनमा दिन बिताउनुहुनेछ। गाडीमा रमाईलो हुनेछ। मन प्रियजनसँग भेटेर खुसी रहनेछ र तपाईं वैवाहिक खुशीको पूरा खुशी प्राप्त गर्नुहुनेछ।
तपाईंको लागि आर्थिक लाभको दिन छ। घरमा शान्ति र खुशीको वातावरण रहनेछ। रोजगार खोज्नेले रोजगारीको लाभ र सहकर्मीको सहयोग पाउनु हुनेछ। कार्यसिद्दि तथा सफलता मिल्नेछ। बोलि र व्यवहारमा ध्यान दिनुहोला।
मन चिन्ताग्रस्त र दुविधायुक्त रहनेछ। कुनै पनि काममा दृढ रहन सक्षम रहनु हुनेछैन। त्यसैले भाग्यले साथ दिनेछैन। सन्तानको स्वास्थ्यको चिन्ता रहनेछ। घरमा ठुलो व्यक्तिको स्वास्थ्य खराब हुन सक्ला। अनावश्यक खर्च बढ्नेछ।
तपाईंको स्वभावमा प्रेम छल्किनेछ। मानसिक रूपले व्याकुल रहनुहुनेछ। पैसा कमाउने सम्बन्धि योजना बनाउन सक्नुहुनेछ। आमाबाट लाभ मिल्न सक्छ। विद्यापार्जन गर्नको लागि विद्याप्राप्तिमा सफलता मिल्नेछ।
तपाईंको दिन शुभ फलदायी छ। रचनात्मक र कलात्मक शक्तिह बढ्नेछ। वैचारिक स्थिरताको कारण आफ्नो काम राम्ररी पूरा गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिनको लागि शुभ दिन छ। साथीहरूका साथ छोटो यात्रा गर्नुहुनेछ।
Previous articleयसपालिको मनसुनबाट १८ लाख मानिस प्रभावित हुने अनुमान
Next article१ सय ४८ वर्षपछि आज दुर्लभ संयोग, यी ४ राशिलाई लाभ
आज श्रावण १४ गते बिहिबार, कस्तो रहला तपाईंको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल !
भोलि श्रावण १४ गते बिहिबार, कस्तो रहला तपाईंको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल !
आज श्रावण १३ गते बुधबार, कस्तो रहला तपाईंको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल !
चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले दिए प्रधानमन्त्री देउवालाई बधाई